उसले हरेक रजस्वलामा मलाई सम्झिन्छे रे …
पोखराबाट बुटवल सम्मको रात्रीबसमा उ मेरो साथमा थिई। रातको चिसोमा बसले ईन्जिन तताउदै गुडिरहेको थियो । एक घण्टाको रफ्तारमा उ र म मौन थियौ । त्यसपछि समान्य कुराकानी पछि दुबै आ आफ्नै सुरमा थियौ। पोखरा फुपुको घरमा आएकी रे घुम्न। नाम रश्मी रहेछ।
राती करीब एघार बजे बस खाना खाने ठाउमा रोकियो। सबै जना ओर्लिए तर उ ओर्लिन। ‘तिमी खाना नखाने ? मैले सोधे । नाई म यात्रामा खदिन भनी उसले। म हात धोएर रिसेप्सनमा खानाको कुपन लिन गए । पछाडी खल्तीबाट पैसा निकालेर पैसा दिन लाग्दा पर्सको बीटमा रग त जस्तै रातो लागेको देखे।
‘रु’दै थिई बिचरी,मैले झोलाबाट टाबेल झिकेर बे’र्न लगाए अनी त्यही खाना खाने होटेलको बाथरुममा फ्रेस हुदै गर म तिम्रो लागी प्याड किनेर आउछु भनी निस्किए
……भिडियो हेर्न तल क्लि गर्नुहोस्…
म झस्कि ए अनी पछाडीको खल्तीमा हात लगेर छामे। बाक्लो जिन्समा र’गतका दा-गहरु लागेको पाए। हतार हतार दौडिदै म बसमा गए र मेरो सीटमा के भएको छ भनेर हेर्न। सीटमा पुग्दा उ रुँदै सीट पुछिरहेकी थिई। ड’रा-एकी अनी आ’त्ति’एकी थिई। ‘के भयो तिमीलाई ? किन रो-ए’की ? तिमीलाई चो’ट लागेको छ ? यो र’ग’त कसरी ? मेरो पाईन्टको पछाडी समेत लागेछ’
नजिकैको मेडिकलमा गएर मैले एक प्याक स्या-निटरी प्या-ड किनिदिए र उसलाई दिए। कपडा राखेको झोला सबै बसको छतमा रहेछ,सहचालक भाईलाई फकाएर उसको कपडा निकालेर दिए । उ अब आँसु पुछेर मुस्कुराई । समोसा,चाउचाउ र चटपटे किनेर हामी बसमा चढ्यौं । उ लजाएकी थिई तर म उसलाई अप्ठ्यारो महसुस गराउन चाहन्न थिए ।
त्यस दिनको लागी धन्यबाद हजुरलाई । यस्तै यस्तै भनेर हरेक महिनाको एक दिन मलाइ सम्झिन्छे उसले ।
दुई बटा समोसा र चटपटे खाई उसले,भोकाएकी रैछे। त्यसपछि रातभर उ मेरो काधमा निदाई । बिहान बस बुटवलमा रोकियो । उ आफ्नो गन्तब्य म आफ्नो गन्तब्य । छुट्नु अघी भाबुक र प्रेमिल नजरले हेरेर मुस्कुराउदै धन्यबाद भनी । ‘मिल्छ भने हजुरको मोबाईल नम्बर दिनु न।’ यस्तै भन्दै अ’ड्कि’रहेकी थिई उ।मैलै मेरो मोबाईल नम्बर दिएर आफ्नो बाटो लागे। पाच दिनको बसाईपछि म घर फर्किए।
त्यसपछिका दिनहरुमा हरेक महिनाको एक दिन उसले फोन गरेर भन्छे‘तपाईको टावेल म संगै परेछ,फिर्ता गर्नु पर्ने। त्यस दिनको लागी धन्यबाद हजुरलाई । यस्तै यस्तै भनेर हरेक महिनाको एक दिन मलाइ सम्झिन्छे उसले ।
यो सामग्री सामाजिक सञ्जालवाट लिइएको हो । लेखकको नाम उल्लेख नभएका कारण लेखकको नाम बिना नै राखेका छौं ।